Amakhasino Eselula Abadayisi Ababukhoma aseNingizimu Afrika
Ikhaya / amakhasino eselula abadayisi ababukhoma aseningizimu afrika
Imboni yemidlalo eku-inthanethi ibone ukuthuthuka okuningi kwezobuchwepheshe futhi imidlalo enomdayisi obukhoma ifakwe kamuva kumasayithi okugembula. Ngaphezulu kwalokho, ngenxa yobuchwepheshe yakamuva, le midlalo ingadlalwa kumadivayisi aphathwayo uma i-inthanethi yakho ixhumeke kahle. Amakhasino eselula asetshenziswa ngabadlali baseNingizimu Afrika acebise iminikelo yawo yokudlala ngale ndlela yokuzijabulisa, ngakho-ke manje ungahamba nemidlalo yakho oyithandayo yetafula futhi uyijabulele ematafuleni abukhoma nomaphi.
Ngokunikeza abadlali ukusakazwa kwevidiyo esezingeni eliphakeme lwemidlalo bukhoma, imidlalo yabadayisi ababukhoma inikeza isipiliyoni semidlalo esingaqhathaniseki esifana naleso ongasithola emahholo okudlala ezitini nodaka. Khohlwa ngokuvakashela amakhasino asezakhiweni aseduze kwakho njengoba manje ungajabulela imidlalo ebanzi yabadayisi ababukhoma futhi unqobe ikhasino uhamba.
Amakhasino Eselula Abadayisi Ababukhoma asebenzisa i-ZAR
Yini Imidlalo Enabadayisi Ababukhoma
Njengoba ungaqagela uma ufunda igama labo, imidlalo enodayisi obukhoma yimidlalo yasekhasino ephathwe ngabadayisi ababukhoma. Njengakumakhasino asezakhiweni, le midlalo yekhasino iphathwe ngabadayisi ababukhoma kanye nama-croupier, abantu bangempela abaphatha le midlalo esikhundleni sama-Random Number Generators aphatha imidlalo yasekhasino. Kusukela ukudalwa kobuchwepheshe bekhasino lomdayisi obukhoma emuva ngonyaka ka-2003, izinhlobo eziningi zemidlalo zingeziwe ohlwini lwabadayisi ababukhoma, ngakho-ke namuhla abadlali bangakhetha emidlalweni ehlukahlukene kanye nezinhlobohlobo zazo.
Imidlalo yekhasino isakazwa bukhoma isuka kumakhasino asezakhiweni iya kumaselula ahlakaniphile noma ithebhulethi yakho futhi ungajoyina itafula oyithandayo bese uqala ukudlala umdlalo ngokushesha. Ngokuya ngekhasino yeselula odlala kuyo, ungakhetha i-Live Blackjack, i-Roulette, i-Baccarat ne-Poker nezinhlobonhlobo. Abadlali abake badlala imidlalo yomdayisi obukhoma kumadivayisi abo edeskithophu bazodlala kalula kumaselula abo ahlakaniphile noma kumathebulethi futhi labo abasha kulolu hlobo lokuzijabulisa bazofunda izindlela futhi basebenzise amasu abo kungenabunzima njengokufana nemidlalo yetafula eku-inthanethi.
Uhlu lokubheja ematafuleni abukhoma lungaba banzi impela, kepha futhi ungahlangabezana namakhasino abukhoma anikeza amatafula ahlukene abadlali abanemali eningi nabanemali encane. Thola itafula ngokuya ngokuthanda kwakho nesikhwama sakho bese ulijoyina. Njengoba imidlalo isakazwa bukhoma, uzoba nemizuzwana engu-30 noma ngaphezulu ukukhetha ama-chips ahambelana nebhajethi yakho bese ubheja etafuleni. Uma ungakwazanga ukubheja ngesikhathi esithile, kuzomele ulindele elinye ithuba lokudlala futhi. Imidlalo yabadayisi ababukhoma ayitholakali kumodi yokudlala mahhala ezimweni eziningi.
Lapho udlala imidlalo yomdayisi obukhoma kudivayisi yakho yeselula, zonke izilawuli zisezandleni zakho futhi zikuvumela ukuthi ubeke ukubheja kwakho futhi ulawule umdlalo kalula. Ukuthola isipiliyoni esinethezekile sokudlala uhamba, kufanele ucabange ukudlala imidlalo yabadayisi ababukhoma kumathebulethi njengoba eza nezikrini ezinkulu futhi izikrini zamaselula ahlakaniphile zingabonakala ziminyene ngoba kunevidiyo, iphaneli yokulawula nezinye izinto. Amakhasino eselula asetshenziswa abadlali baseNingizimu Afrika akuvumela ukuthi ubheje nge-ZAR ukuze ukwazi ukugxila kugeyimu nakumasu esikhundleni sokukhathazeka ngezindleko zokushintsha imali.
Amabhonasi Nezidingo Zokubheja Ukuze Ukhiphe Imali
Iqiniso lingukuthi awusoze uthole amakhasino amaningi anikeza amabhonasi kanye namaphromoshini afanele imidlalo yabadayisi ababukhoma. Yize ungakujabulela ngenkathi ubheja imali yebhonasi, ukuguqula amabhonasi nokuwina okutholwe kule midlalo kube yimali yangempela kuzoba yinto engenzakali. Into ngukuthi amakhasino abeka izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali eziphakeme futhi abadlali abakwazi ukuzifeza ngenkathi bedlala imidlalo yabadayisi ababukhoma njengoba ukubheja kwale midlalo kunikela kuphela ngo-25% noma nangaphansi kwenani olibhejele ukuze wenze imali yamahhala ibe yimali yangempela. Imidlalo yetafula kuhlanganise naleyo etholakalayo ematafuleni bukhoma ngokuyinhloko yimidlalo ehlanganisa inhlanhla nangekhono, okusho ukuthi izinqumo zomdlali zingashintsha umphumela womdlalo.
Amakhasino athile anikeza amaphromoshini akhethekile kumidlalo yabathengisi ababukhoma ongawasebenzisa. Imvamisa iza ngengohlobo lwebhonasi efakwa uma udiphozitha noma ukubuyiselwa kwemali okukuvumela ukuthi uthole ingxenye yemali oyilahlile ngenkathi ubheja imali yangempela kulolu hlobo lwemidlalo yekhasino. Lawa mabhonasi abuya nezimfuneko ezingafezwa ngabathandi bemidlalo yabadayisi ababukhoma, ngakho-ke kufanele uyisebenzise uma usungumdlali wekhasino.
Kungani Udlale Imidlalo Yabadayisi Ababukhoma Ngeselula
Uma ubukade uzibuza ukuthi yiziphi izizathu ezibalulekile zokudlala imidlalo yasekhasino yabadayisi ababukhoma, kufanele sisho ukuthi akudingekile ukuba ngumlandeli wemidlalo yetafula ngokujwayelekile ukuze uyijabulele. Inzuzo enkulu yokudlala kumatafula abukhoma aphathwe ngabadayisi bangempela isipiliyoni sangempela semidlalo yekhasino abakunikeza sona. Asikho isidingo sokuvakashela ikhasino yasendaweni yakho njengoba imidlalo yabadayisi ababukhoma ikhona kudivayisi yakho yeselula futhi ungayijabulela ngenkathi ulinde izithuthi zomphakathi noma uhlezi ekhefi lakho olithandayo.
Amakhasino abukhoma angafinyelelwa ngqo ngesiphequluli sakho nganoma yisiphi isikhathi ebusuku noma emini ezimweni eziningi, ngakho-ke asikho isidingo ukuthi ucabange ngamahora okuvula. Uma uwuhlobo lomdlali ohlale engabaza ukulunga kwegeyimu nemiphumela, lena indlela efanelekile yokuzijabulisa kuwe. Uzobuka abadayisi bangempela beshova futhi besebenzisa amakhadi noma bephendula isondo le-Roulette esikhundleni se-RNG, ngakho umdlalo uzokwenzeka ngaphambili kwamehlo akho. Kuzokwanela ukukwenza ukholwe futhi uphumule ukuze ukwazi ukujabulela isipiliyoni sokudlala esijulie. Uma udlala emakasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika, akufanele ukhathazeke ngezindleko ezengeziwe njengoba unenkululeko yokudiphozitha imali yakho, ubheje futhi ukhiphe imali nge-ZAR.